आज एकैदिन ५८६ संक्रमित भेटिए, कुन जिल्लामा कति थपिए ? हेर्नुहोस्
June 17, 2020 836
बुधबार नेपालमा थप ५८६ जनामा कोरो’ना संक्र’मण भएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्राल’यले जानकारी दिएको छ। देशका विभिन्न स्थानका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्ष’णमा ४० महिला र ५ सय ४६ जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पाइएको मन्त्रा’लयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठा’नमा गरिएको परीक्षणमा उदयपुरका ४ जना र सिराहाका १ जनामा कोरोना संकरमण पाइउको छ। यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोर’ङका ९ जना र झापाका २ जनामा को’रोना संक्रमण पाइएको छ। यस्तै जनकपुरस्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा धनुषाका ४ जना, महोत्तरीका ५ जना, बाँकेका ७ जना र रौत’हटका ११ जनामा को’रोना संक्र’मण पुष्टि भएको छ।
नारायणी अस्पता’लको प्रयोगशालामा महो’त्तरीका ६ जनामा यसको संक्रमण पाइएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा कपिलवस्तुका ८ जना, महोत्तरीका १८९, रौतह’टका ३९, रुपन्देहीका ३, सर्ला’हीका ६ जना र प्यूठा’नका १८ जनामा कोरोना संक्रमण पाइएको छ।
भरतपुर अस्पतालको प्रयोगशालामा ३ जना, धुलिखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा धनुषाका २२ जना र रौतहटका ७७ जनामा कोरोना संक्रमण पाइएको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गरिएको परीक्ष’णमा कैलालीका ११ जना, पोखराको प्रयोग’शालामा पर्व’तका ३ जना र पूर्वी नवलपरासीका १७ जनामा समेत कोरोना संक्र’मण पुष्टि भएको छ।
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोग’शाला रुपन्देहीमा गुल्मीका २६ जना, प्यूठानका २० जना, रुपन्देहीका ४, र अर्घाखाँ’चीका ८ जनामा समेत यसको संक्रमण पाइएको छ। भेरी अस्तपालको प्रयोग’शालामा बाँ’केका १ जना र बर्दियाका ३१ जनामा कोरोना संक्रमण पाइएको छ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रति’ष्ठानमा दाङका ८ जना र सल्यानका २५ जना संक्रमित पाइएको छ। सुर्खेतको प्रयोग’शालामा सुर्खेतका २ जना र दैलेखका पनि २ जनामा नै कोरोना संक्र’मण पाइएको छ।
कर्णाली स्वास्थ्य वि”ज्ञान प्रतिष्ठानमा का’लीकोटका १४ जना र सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा कञ्चनपुरका ७ जनामा स’मेत कोरोना संक्रमण पाइएको छ। – नेपाल लाईभ
Prevसुशान्तका ५ वर्षिय भान्जाले मामाको निधन’को खबर सुनेपछि दिए मनै रुवाउने यस्तो प्रतिक्रि’या
Nextभोलि असार ४ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस्….
भागिरथ घ’टना प्रकरण: अभि’योग पुष्टि भएपनि आरो’पी जे’ल जानु नपर्ने…
खाडी मुलुक जान लागेका ८४ नेपाली विमानस्थलबाट फिर्ता, फर्काउनुको कारण यस्तो